CDM သမားမြား ပွနျလာရနျ တနင်ျသာရီ စဈကောငျစီ ဖိတျချေါ – Network Media Group
တနင်ျသာရီ တိုငျး ပုလောမွို့နယျအတှငျး CDM သမားမြား၊ အမှုဖှငျ့ခံထားသူမြား ပွနျလာကွရနျ စဈကောငျစီမှ လကျကမျးစာစောငျမြား ဖွနျ့ဝနေသေညျဟု မွို့ခံမြားက ပွောသညျ.
CDMသမားမြား၊ စဈကောငျစီမှ အမှုဖှငျ့ထားသူမြား နရေပျပွနျ လာပါက အမှုကိုရုတျသိမျးကွောငျး ပုလောရဲတပျဖှဲ့က လကျကမျးစာစောငျမြားကို စကျတငျဘာ ၂ ရကျ နကေ့ ဖွနျ့ဝနေသေညျဟု ပုလောမွို့ခံ မြားက ပွောသညျ။
ထိုလကျကမျးစာစောငျမြားကို ပုလောမွို့တှငျ ပထမဆုံးဝငှေ ခွငျးဖွဈပွီး ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး အဖှဲ့ဝငျ မြား၊ ရာအိမျမှူး၊ ဆယျအိမျမှူးမြားနှငျ့ ပုလော ရဲစခနျးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက မွို့မဈေးကွီးထိပျတှငျ ဖွနျ့ဝပေေးနသေညျ ဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နရောအသီးသီးကို ရောကျရှိနသေညျ့ CDM ပွုလုပျထားသူမြား၊ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြားနှငျ့ အရပျသားပွညျသူမြားသညျ လူသတျခွငျး၊ မီးရှို့ဖကျြစီးခွငျး နှငျ့ အကွမျးဖကျမှုမြား မပွုလုပျခဲ့ပါက အရေးယူခံရမညျမဟုတျကွောငျး ရေးသားထားသညျ ဟု အမှတျ ၁ ရပျကှကျ တှငျ နထေိုငျသူ အသကျ ၃၀ခနျ့ လူငယျတဈဦးက ပွောသညျ။
“သူတို့က အရေးမယူဘူး ဆိုပမေယျ့ ပွညျသူတှကေ မယုံရဲဘူး၊ ကြုံးထဲရောကျပွီးမှ ခြောငျပိတျအဖမျးခံရ တာ မြိုး ဖွဈမှာစိုးလို့၊ သူတို့အလိုရှိတဲ့ ကာယကံရှငျ ဖမျးမမိရငျ မသကျဆိုငျတဲ့ မိဘ ညီအကို မောငျနှမတှကေိုတောငျ ဥပဒမေဲ့ လကျတလုံးခွား ဖမျးနကွေတာ ကွားသိနရေတာ” ဟု ထိုလူငယျ က ပွောသညျ။
မိမိနရေပျသို့ ပွနျလညျ လာရောကျနထေိုငျရနျ ဆကျသှယျပါက အရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျ မဟုတျဘဲ ဆကျ သှယျရနျ ဖုနျးနံပါတျမြားကိုလညျး စာစောငျထဲတှငျ ဖျောပွထားကွောငျး သိရသညျ။
ဆကျသှယျလာမညျ့ အရပျသားပွညျသူမြားကို အမညျ၊ မှတျပုံတငျ၊ နရေပျလိပျစာနှငျ့ ဝနျထမျးမြား ဖွဈပါက ဌာနနှငျ့ ရာထူးကိုသာ မေးမွနျးသှားမညျဖွဈပွီး လကျရှိရောကျနသေညျ့ နရောကို မေးမွနျးသှားမညျ မဟုတျဟု ထညျ့သှငျးဖျေါပွထားသညျဟု သိရသညျ။
ဆကျသှယျခြိနျတှငျ မေးမွနျးခွငျးအတှကျ စိုးရိမျစရာမလိုကွောငျး နှငျ့ မှတျတမျး ပေးပို့ပွီးနောကျ သတငျးပို့ပေး ရမညျ့ နရောကို ပွနျလညျဆကျသှယျအကွောငျး ကွားပေးသှားမညျ ဟု လကျကမျးစာစောငျအတှငျး ရေးသားပါ ရှိသညျ။
CDM သမားများ ပြန်လာရန် တနင်္သာရီ စစ်ကောင်စီ ဖိတ်ခေါ်
တနင်္သာရီ တိုင်း ပုလောမြို့နယ်အတွင်း CDM သမားများ၊ အမှုဖွင့်ခံထားသူများ ပြန်လာကြရန် စစ်ကောင်စီမှ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေနေသည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်.
CDMသမားများ၊ စစ်ကောင်စီမှ အမှုဖွင့်ထားသူများ နေရပ်ပြန် လာပါက အမှုကိုရုတ်သိမ်းကြောင်း ပုလောရဲတပ်ဖွဲ့က လက်ကမ်းစာစောင်များကို စက်တင်ဘာ ၂ ရက် နေ့က ဖြန့်ဝေနေသည်ဟု ပုလောမြို့ခံ များက ပြောသည်။
ထိုလက်ကမ်းစာစောင်များကို ပုလောမြို့တွင် ပထမဆုံးဝေငှ ခြင်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် များ၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့် ပုလော ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မြို့မဈေးကြီးထိပ်တွင် ဖြန့်ဝေပေးနေသည် ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေရာအသီးသီးကို ရောက်ရှိနေသည့် CDM ပြုလုပ်ထားသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် အရပ်သားပြည်သူများသည် လူသတ်ခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ မပြုလုပ်ခဲ့ပါက အရေးယူခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း ရေးသားထားသည် ဟု အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် တွင် နေထိုင်သူ အသက် ၃၀ခန့် လူငယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“သူတို့က အရေးမယူဘူး ဆိုပေမယ့် ပြည်သူတွေက မယုံရဲဘူး၊ ကျုံးထဲရောက်ပြီးမှ ချောင်ပိတ်အဖမ်းခံရ တာ မျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့၊ သူတို့အလိုရှိတဲ့ ကာယကံရှင် ဖမ်းမမိရင် မသက်ဆိုင်တဲ့ မိဘ ညီအကို မောင်နှမတွေကိုတောင် ဥပဒေမဲ့ လက်တလုံးခြား ဖမ်းနေကြတာ ကြားသိနေရတာ” ဟု ထိုလူငယ် က ပြောသည်။
မိမိနေရပ်သို့ ပြန်လည် လာရောက်နေထိုင်ရန် ဆက်သွယ်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် မဟုတ်ဘဲ ဆက် သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း စာစောင်ထဲတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ဆက်သွယ်လာမည့် အရပ်သားပြည်သူများကို အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက ဌာနနှင့် ရာထူးကိုသာ မေးမြန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိရောက်နေသည့် နေရာကို မေးမြန်းသွားမည် မဟုတ်ဟု ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည်ဟု သိရသည်။
ဆက်သွယ်ချိန်တွင် မေးမြန်းခြင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်း နှင့် မှတ်တမ်း ပေးပို့ပြီးနောက် သတင်းပို့ပေး ရမည့် နေရာကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားပေးသွားမည် ဟု လက်ကမ်းစာစောင်အတွင်း ရေးသားပါ ရှိသည်။